Kuyamura chimwe chimomz changa yanzwa nezemo, ndakainyikidza nyoro! – Vanoda Zvinhu
On May 17, 2016 March 1, 2018 By svirorist
Ndaigara muKadoma apa ndainge ndichangotanga kugara ndega graft ndaiva naro zvinhu zvanga zvisati zvakunetsa munyika yedu.Ndainge ndava nemwedzi muviri ndichigara pamba apa ndokutozivana nevanhu vazhinji vemuraini asi ndaingovawo munhu akazvinyararira ndisingatsvage zvakawanda.
Mumwe musi ndichibva kubasa ndakasvika ndiwane panext door pakazara mota panze ndokubva ndapfuurira kuyenda pamba pandaigara ndikasvika pangori nevana chete ndichibva ndabvunza kuti ko chii chiri kuitika panextdoor mumwe wavo ainge ati kurei ndiye akabva ati zvanzi baba veipapo ndivo vaita accident ndokubva ndati aah shame. Ndakapinda mumba mangu ndokusiya zvinhu ndichibva ndatsvaga something small chekudya ndokuyendawo kunext door kurufu.
Ndiripakati pekutenderera imba iyi yakabva ndasangana nemukadzi wekufirwa akapfeka black but pakutanga handina kuziva kuti ndiye.I did not expect kusangana nemufirwi panze panguva yakadai, ndakabva ndati nedzenhamo ndikanzwa munhu adaira achiti aah Eddy dzaonekwa murume wangu atisiya.Ndakarohwa nehana kuti ah munhu andiziva sei ndipo pandakaziva kuti ndaitaura nemufirwi shirikadzi ndichibva ndati ko murikutsvagei panze pano, zvikanzi ndaneta nekuchema ndanga ndichida nguva shoma ndiri ndega ndichirohwa nemhepo ndosaka ndabuda kwasviba so ndikauya kuseri kuno.
Mukadzi uyu akabva ataura zvimwe zvakandikatyamadza zvikanzi kana munhu atisiya tinosuwa ipapo kwete mazuva ese plus dzimwe nguva mwari vanenge vachikuda kuti ufare panyika kwete kugara uchishunguridzwa nemunhu. Some part of me is sad kuti atisiya but some pretty much happy nekundibata kwaaiyita ndini ndingadai ndakazvisungirira first.
Ndikabva ndati ki murikurevei zvikanzi in short ndirikuda kusvirwa nhasi ndikabva ndati muri serious here zvikanzi ehe murume uyu haana musi waakamborara neni asina kutanga andirova. Saka I am not going to be sad ndirikutoda kunakirwa nhasi, semunhu ainge akapfeka zvinhu akavhara face yake takayenda kumba kwangu ko vanhu vese vaiva kurufu, ndakasvika ndokumupushira pamubhedha ndokubva ndasimudza skirt ndokuiti bvooo ndikanzwa munhu ayita kufemuruka mboro ichinyura.
Ndakakoira zvenguva diki diki ndikanzwa munhu akuchema misodzi kutozara mumatama, achitaura achiti mwari vachitora chimurume chehutsinye apa ndipo pandokatya ndokubva ndaburitsa mboro yangu ndichibva ndakumupfekedza hembe ndokubva ndabuda naye ndokufamba muraini ndichizama kutaura naye ndichimupa mazano. Ndainge ndisina kutunda panguva iyi asi ndaiziva kuti zuva iri richadzoka futi this time haazocheme ndiri pakati prkusvira.
Categories : DzesviroTags : nyoro
PREVIOUS POST Previous post: Hunhubu hwandakazoita nemukadzi waTsano!
NEXT POST Next post: Kukwirwa kwandakaitwa Murume wangu aripo